Diarin’ny Vavolombelon’i Jehovah 2016
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Ossète Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tiorka Tseky Tsonga Xhosa Yorobà Zoloa
Kanada: Kangirsuk, tanànan’ny Inuit any amin’ny faritra avaratr’i Québec
Itoriana ny Kanadianina rehetra
Voadika amin’ny fiteny valo fampiasan’ny teratany any Kanada izao ilay video hoe Nahoana Ianao no Tokony Hianatra Baiboly? Nanao dia fitoriana tany Nunavik, any akaikin’ny tendrontany avaratra, ireo rahalahy tamin’ny Oktobra 2014. Naharitra folo andro izany. Naseho tamin’ny teny inuktitut ilay video. Nahita izany ny ankamaroan’ny olona tao amin’ny tanàna 14, izany hoe olona 12 000 mahery.
Niaiky volana ilay mpiandraikitra ny kianja
Nisy fivoriambe iraisam-pirenena tany Séoul, any Korea Atsimo, tamin’ny Septambra 2014. Tao amin’ny kianja iray niadiana ny amboara eran-tany tamin’ny lalao baolina kitra izy io no natao. Nisy 56 000 mahery ny mpanatrika. Faly ny mpiandraikitra an’ilay kianja satria nahalala fomba ny Vavolombelona sady niara-niasa tsara tamin’izy ireo nandritra ny fandaharana. Hoy izy: “Nahalala fomba daholo ry zareo. Gaga aho nahita azy ireo nanadio an’ilay kianja. Na ny mpanadio matihanina ato aminay aza tsy nahavita ny vitan’izy ireo. Tiako raha manana toe-tsaina hoatran’ny an-dry zareo ny mpiasa ato aminay rehefa miasa. Mila manao hoatran’ny Vavolombelon’i Jehovah isika, raha te hanompo an’Andriamanitra araka ny tokony ho izy.”
Korea Atsimo: Fivoriambe iraisam-pirenena tany Séoul, 2014
Jehovah no nampiofana azy ireo
Nangataka tany amin’ny fanjakana ny Vavolombelon’i Jehovah any Soeda, mba hahazo fanampiana ara-bola hoatran’ny fivavahana hafa. Nolavina anefa izany tamin’ny Mey 2012. Navelan’ny Filan-kevi-pitantanana hampakatra an’ilay raharaha tany amin’ny Fitsarana Tampony Momba ny Raharaham-panjakana ireo rahalahy.
Nanapa-kevitra ny hanadihady an’ireo rahalahy aloha ny fitsarana. Nivory àry ny rahalahy vitsivitsy avy amin’ny firenena maro, mba handinika izay fanontaniana mety hapetraky ny fitsarana sy ny fomba hamaliana azy. Tao amin’ny Efitrano Fanjakana iray tany Stockholm no nanaovana an’ilay fanazaran-tena.
Mbola teo am-panaovana an’ilay izy ry zareo no nisy nampaneno ny lakolosim-baravarana. Ankizivavy roa, 13 sy 14 taona, no tao. Te hametraka fanontaniana vitsivitsy momba ny Vavolombelon’i Jehovah, hono, izy ireo. Hoy ilay rahalahy namoha varavarana: “Saika hoteneniko ry zareo hoe amin’ny manaraka miverina fa izahay mbola sahirana.”
Niresaka tamin’izy ireo ihany anefa ilay rahalahy. Be dia be ny fanontanian’izy ireo, ary voafaritra tsara ny sasany, ohatra hoe momba ny raharaha ara-tsosialy sy fifidianana. Niverina tany amin’ny namany ilay rahalahy avy eo. Noresahiny tamin’izy ireo ny fanontaniana napetrak’izy roa vavy sy ny fomba namaliany azy.
Natao ny ampitson’io ilay fanadihadiana. Gaga ireo rahalahy, satria maro tamin’ny fanontaniana napetrak’ireo mpitsara no nitovy tamin’ny azy roa vavy. Hoy ilay rahalahy solontenan’ny fandaminana: “Tokony ho nitebiteby be aho, satria niatrika an’ireo mpisolovava fanta-daza teto amin’ny firenena. Tony be anefa aho. Tsapako hoe nanohana anay i Jehovah, ka nampiofana anay ny omalin’io.”
Nahazo rariny ireo rahalahy. Nasaina nodinihin’ny fanjakana indray ilay raharaha, mba hamoahany didy vaovao.
Vary iray gony avy amin’i Ken
Enin-taona i Ken ary mipetraka any Haïti. Faly izy rehefa naheno hoe hahazo Efitrano Fanjakana vaovao ny fiangonan-dry zareo. Nanao boatin-drakitra àry izy ary nafeniny tao amin’ny efitranony ilay izy. Omen’ny ray aman-dreniny vola kely izy isaky ny mandeha mianatra. Tsy nolaniny izany fa nataony tao anatin’ilay boaty. Nanao an’izany foana izy mandra-pahatongan’ilay ekipa mpanao fanorenana. Nomeny azy ireo ilay boaty, ary ampy nividianana vary iray gony ny vola tao. Ny vary avy amin’i Ken no natao sakafo antoandro tao amin’ilay toeram-panorenana, nandritra ny andro maromaro.
Baiko avy amin’ilay jeneraly
Nisy Ebola tany Sierra Leone tamin’ny herintaona, ka faritra maro no tsy azo nidirana. Tsy maintsy naka karatra famantarana àry ny mpiandraikitra ny faritra mba hahafahany niditra tany, sady naka fahazoan-dalana ho an’ny fiara. Nila nanao toy izany koa ireo mpitatitra boky sy gazety ary taratasy. Tsy maintsy nankany koa ny Komitin’ny Vonjy Rano Vaky, mba hitondra sakafo sy ranon-javely ary fitaovana manokana fitsapana hafanana. Nahagaga fa nahazo izay taratasy nilainy foana ireo rahalahy.
Ity misy fitantarana mampahery: Nanao fangatahana ireo rahalahy mba hahazo karatra famantarana 34 sy fahazoan-dalana ho an’ny fiara 11. Nila nihaona tamin’ny jeneraly iray anefa izy ireo vao nahazo an’ireo. Nihaona taminy àry ny rahalahy roa avy ao amin’ny biraon’ny sampana, tamin’ilay andro tokony hahazoana an’ireo karatra sy fahazoan-dalana. Tsy hita anefa izay nalehan’ilay fangatahana nataon’izy ireo. Nasaina nisava tamin’ireo fangatahana be dia be ireo rahalahy fa tsy nahita. Nilaza tamin’ny sekreterany ilay jeneraly tamin’izay hoe hidiany ny biraony, ary tsy handray fangatahana intsony izy raha tsy afaka tapa-bolana. Nivavaka mangina ireo rahalahy mba hampian’i Jehovah. Nanontanian’ilay jeneraly izy ireo avy eo hoe: “Firy ny karatra sy fahazoan-dalana ilainareo?” Rehefa notenenina azy ilay isa dia nitsangana izy sady nivazavaza hoe: “Be loatra izany!”
Nohazavain’ireo rahalahy taminy ny asantsika sy ny fomba anampiantsika an’ireo tra-boina. Tsy niteny aloha ilay jeneraly, fa avy eo izy nitodika tany amin’ilay sekretera sady nilaza hoe: “Omeo an-dry zareo daholo izay tadiaviny.”
Guinée sy Sierra Leone: Nasaina nanasa tanana ny olona tany amin’ny Efitrano Fanjakana rehetra
Andinin-teny ho An’ny Taona 2016
“Tena Tianay ny Tele JW”
Hafainganina ny Fanorenana Efitrano Fanjakana
Manao Ahoana ny Fandrosoan’ny Asa any Warwick?
Mihamazava Foana ny Hazavana Ara-panahy
Fiteny Fanampiny Namoahana ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
Indray Mitopy Maso An’i Indonezia
“Eto no Tiako Hanombohana Azy”
Fomba Fitory Taloha
Sarobidy Taminy ny Harena Ara-panahy
Namokatra ny Fitoriana Teto Java Andrefana
Mpisava Lalana Be Herim-po
Tonga ny Misioneran’i Gileada
Nitatra Niantsinanana ny Asa
Nihamaro ny Misionera Tonga
Tena Zanak’i Saraha Izy
Tsy Maty Tamin’ny Fikomian’ny Kominista Aho
Mpisava Lalana Manokana Nandritra ny 50 Taona
Lehiben’ny Jiolahy Nefa Lasa Olom-banona
Tapa-kevitra ny Hanohy ny Asa
Niara-nivory Foana Izy Ireo
Miharihary ny Fitiavana Kristianina Rehefa Misy Loza
Tsy Nanaiky Lembenana Mihitsy Izahay
Avotra Izahay fa Nankatò
Nandroso ny Asa
Tsy Menatra Mitory ny Anaran’i Jehovah
Biraon’ny Sampana eny ana Habakabaka
Nitahy Anay Mihoatra Noho ny Noeritreretinay i Jehovah!
Tafaraka Ihany Rehefa Ela ny Ela!
Zato Taona Lasa Izay: 1916
Tatitra Maneran-tany 2015
Fahatsiarovana: Zoma 3 Aprily 2015
Soratra Fandikana boky Diarin’ny Vavolombelon’i Jehovah 2016